I-Pola de Lena, iZiko, iNdawo yeeHolo zeDolophu
Ifulethi eliphakathi ePola de Lena, esecaleni kweHolo yeDolophu, kwindawo yayo enkulu unokufumana isidlo sakusasa kwiRegueral Palace kunye neVicente Regueral House. Inamagumbi okulala amathathu, ikhitshi, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela, indlu yangasese kunye nepantry.
Uyakonwabela ukuhlala kamnandi, kwindawo esembindini kodwa ezolileyo yePola de Lena. Ngeendawo ezi-3 zokutyibilika kwi-ski kwisithuba seyure: iValgrande Pajares, iFuentes de Invierno kunye neSan Isidro. Ubuninzi beendlela zokuhamba, imiqondiso yeentaba ezidlulayo (iAngliru, iLa Cubilla, njl.njl.) kwimisebenzi yebhayisikile zombini ngeendlela kunye neengoma ze-MTB, iintaba ezinjengePeña Ubiña kunye neParque Natural de las Ubiñas - La Mesa. Ukongezelela, i-Pola de Lena inonxibelelwano oluhle kakhulu ngomgwaqo omkhulu kunye ne-Oviedo kwi-20 min, i-Gijón kwi-30 min, i-Avilés kwi-40 min.
Ecaleni kweHolo yeDolophu, iPlaza ebonelela ngentengiso rhoqo ngentsasa yangoMgqibelo, iPaki, apho unokonwabela indawo yezindlu zecider, iivenkile ezinkulu, iindawo zokudlala ... zonke zifikeleleka ngaphakathi kwe-300m.
Siya kufumaneka ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho, ukuba kukho into oyifunayo.